तीतो मीठो | गृहपृष्ठ | Page 35
सरकार खासगरी प्रम ओली देशमा जसरी पनि समृद्धि ल्याइछाड्ने भनेर सुरुवाल कसेर लागिरहनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँल...
भोलि रातिदेखि नेपाली क्यालेन्डर फेरिनेछ । वि.सं. २०७५ को बिदाइ र २०७६ को स्वागतमा थुप्रै बोतलका बिर्काहरू खुल्...
‘लगानी सम्मेलन २०१९’ पनि सकियो । अब मन्त्री, अर्थशास्त्री, विज्ञसिज्ञहरूलाई केही महीनासम्म गफ गर्न मसाला पुगेक...
आजदेखि शुरू हुँदै छ विदेशी लगानीकर्तालाई लोभ्याउन ‘लगानी सम्मेलन’ । लगानीकर्तालाई पैसा हाल्न फकाउन सरकारले झण्...
नेपालले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने रे । त्यै भएर २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ भनेर घोषणा गर्द्या छ स...
राजपाले संविधान संशोधन गर्न भनेर सरकारसँग किचकिच गर्‍या गर्‍यै गरेपछि सरकारले पनि ‘मधेशमा तिमीभन्दा ठूलो त अर्...
नेपालमा बनेका अनेकौं आयोगहरूमध्ये धेरै चर्चामा आइरहने एउटा हो, राष्ट्रिय योजना आयोग । दशकौंदेखि यो आयोग देशको...
मन्त्रिमण्डल होइन मन्त्रालय पुनर्गठन
मदन लम्सालसंविधान बनाउन सरकारका इतर हुन् या भितर सबै दलका नेताहरुलाई केवल दुई कुरा चाहिएको टड्कारो देखिन्छ । अहिलेको झगडा त्यसकै लागि हो । एउटा गोजीमा टन्न पैसा, अर्को पद अर्थात् पाए प्रधानम...	बिस्तृतमा
खोइ ! कहाँ छ भ्रष्टाचार ?
मदन लम्सालट्रान्सपेरेन्सी इण्टरनेशनल भन्ने संस्थाले भ्रष्टाचारको सूचीमा रहेका १ सय ७८ देशहरुमध्ये नेपाललाई १ सय ४६ औं स्थानमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेछ । अर्थात् विगतका वर्षहरुमा झैँ यो...	बिस्तृतमा
मदन लम्साल कसले भन्छ, नेपालमा उत्पादनयोग्य उद्योगको सम्भावना छैन भनेर ? केही वर्षयता देशका शहरशहर नगरनगरमा भइरहेका सुन्दरी उत्पादन गर्ने उत्साहलाई मात्रै हेरे पुग्छ । यसले देशमा उत्पादनयोग्य...	बिस्तृतमा
मानिस र कुकुर बिरालाहरू
मदन लम्सालमानिसहरु पनि जनावर हुन् । चार्ल्स डार्बिनले मानिसलाई बाँदरको विकसित रुप हो भनेका थिए । अझ ‘बर्डस्, बिष्टस् एण्ड रिलेटिभ्स’ का लेखक जेराल्ड डयुरेलका अनुसार त मानिसहरु बा...	बिस्तृतमा
पाँच वर्षपछिको नेपाल
मदन लम्सालसाँच्ची पाँच वर्षपछि नेपाल कस्तो होला, कहाँ पुग्ला हँ ? के यो एकथरी मानिसहरुले सोचेजस्तै वा कोशिश गरेजस्तै असफल राष्ट्र बन्ला वा केही नेताले भाषण गरेजस्तै भारत वा चीनको विकासको रेल...	बिस्तृतमा
लौ बजेट आयो !
मदन लम्सालआज अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्दैछन् । शुरुमा ज्ञातभन्दा अज्ञात र जिउँदाभन्दा मरिसकेका शहीदहरुलाई श्रद्धाञ्जलि दिएर मन्त्रीले बजेट भाषण शुरु गर्नेछन् । जब उनको भाषण शुरु हुन्...	बिस्तृतमा
महासङ्घका मुक्केवाजहरू !
मदन लम्सालयसपटकको नेउवा महासङ्घको साधारणसभा बल्ल ऐतिहासिक भन्नलायक भयो । यो सुन्दर क्षण आउन यो महासङ्घले ४५औं साधारणसभा कुर्नुपर्यो । सधैं पैसा मात्रै फालाफाल गरेकाले यसले ‘चार्म...	बिस्तृतमा